Dimple Quful Bump Gun
Dimple Lock Bump Gun (aka. Dimple Pin Bump Key Gun Set) waxaa ku jira 10 bladood oo caalami ah oo loogu talagalay cabbiraadda inta badan dhululubbada biiniska ee aasaasiga ah oo leh hal sadar oo biinanka midig ama bidix ah. Awooda ugu fiican ee kuuskuusyada iyo masaafada ugu wanaagsan ee dhaqdhaqaaqa daab waa la hagaajin karaa. Farsamada muhiimka ah ee kuuskuusku waxay kuxirantahay arimo badan. Sidaa darteed waa lagama maarmaan in la fuliyo nooca garaacista si wanaagsan loo cabiray oo loo kala soocay. Farsamada Muhiimka ah ee loo yaqaan 'Bump Key Technology' ayaa qof walba u sahasha furitaanka ...
H&H 10 Dimple Lock Pick Set waxaa ku jira 10 qaabab kala duwan oo xulasho ah oo ah 2 dhumuc kala duwan, sidoo kale waxaa ku jira laba qalab xiisad. Qalabka gacanta lagu qaato ayaa ka samaysan caag cagaaran, qafiif ah oo adag, mid kasta oo ka mid ah dushana lagu xardho wuxuu u dhigmaa 1-10 ujeeddooyin aqoonsi fudud Maxaa ku jira: 10 qaabab kala duwan oo loo yaqaan 'dimple dimple' oo ah 2 dhumucdood oo kala duwan. 2 qalab xiisad ayaa ku imanaya kiis jilicsan oo jilicsan oo jilicsan H & H, sumadda tayada sare leh! Nidaamka dalabka Diiwaangeli koontada emaylkaaga - Log i ...
HUK Red Tiger Lock Picks waa qaab aad u fiican oo ujeedooyinka guud ee qufulka ah, quful kasta oo la qaado wuxuu leeyahay gacan qabasho barkin super-xajin ah oo loogu talagalay dalabyo badan oo kala duwan. Xulistaan ​​xulashada ahi waxay ka kooban tahay kala-sooc jillaabyo, dullinno la soo qaado, rack picks, soo-saareyaal muhiim ah oo jaban iyo qulqulatooyin xiisad leh. HUK Red Tiger waxay soo bandhigeysaa xulashooyin sifiican loo sameeyay oo loogu talagalay dhamaan heerarka awooda qaadista qufulka. Inaad noocyo noocaas ah ku yeelato hal set waxay ka dhigaysaa tan ujeeddo guud oo ujeedo leh. Nidaamka dalabka Diiwaangeli koontada emaylkaaga ...
GOSO 7 Pin Tubular Lock Pick wuxuu la yimaadaa 3 qaybood oo ku dayanaya saddexda cabbir ee caadiga ah ee aad ku aragtid duurka. Xullo kasta si buuxda ayaa loo hagaajin karaa sidaa darteed waxaad ku samayn kartaa wixii qoto dheer ee aad u baahan tahay. Tani si gaar ah ayey muhiim u tahay sababta oo ah marar badan soosaarayaasha kala duwan ayaa isticmaali doona qufulada ama ka qoto dheer ama ka sii hooseeya waxay kuxirantahay mashiinka. Saddexda cabbir ee nidaamkani la socdo waa 7mm, 7.5mm, iyo 7.8mm. Waxaan awoodnaa inaan ku soo xulo qufulo qufac badan 30 ilbiriqsi gudahood. Si loo dhigo tubulkan ...